နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ငုယင်စွမ်းဖုနှင့် ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Madame Nguyen Thi Kim Ngan တို့နှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံ | Myanmar President Office
Submitted by admin on Mon, 05/13/2019 - 10:16
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့၌ ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချိုတို့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ် သူရဲကောင်းစစ်သည် ဗိမာန်သို့ သွားရောက်၍ ဂုဏ်ပြုပန်းခွေချသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီးတို့သည် ဗီယက်နမ် အမျိုးသားခေါင်း ဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း၏ ဂူဗိမာန်သို့ သွားရောက်၍ ဂုဏ်ပြုပန်းခွေချ အလေးပြုကြ သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ဗီယက်နမ် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်းနေထိုင်ခဲ့သည့် နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိကာ ဟိုချီမင်းအသုံးပြုခဲ့သည့် အလုပ်ခန်း၊ စာကြည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုလေ့လာကြပြီး ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး သို့ ရောက်ရှိပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ငုယင်စွမ်းဖုနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ် များ၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအား ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံ ရေးအဆင့်သို့ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည်နှင့်အညီ နှစ်နိုင်ငံ အကြားတွင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် သားငါး ကဏ္ဍ၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စွမ်းအင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ စသည့်ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမြှင့်တင် ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်သွယ်မှု ၄၅ နှစ် ပြည့်မြောက်မည့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ကျင်းပရေး နှင့် ၂ဝ၂ဝ ပြည်နှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထောက်ခံမှုပေးရေး ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် သူရဦးအောင်ကို၊ ဦးကျော်တင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံ အမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးဝင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြု နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီး တို့အား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးက ရင်းရင်းနှီးနှီးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြ သည်။
နေ့လယ်စာစားပွဲတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီးတို့အနေဖြင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ ဗုဒ္ဓနေ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ရန်နှင့် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသို့ တရားဝင်အလုပ်သဘောခရီးစဉ် လာရောက်လည်ပတ်သည်ကို နွေးထွေး လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါကြောင်း။
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အခါသမယကာလတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အစိုးရနှင့် ပြည်သူ များကိုယ်စား အဆွေတော် သမ္မတနှင့် မြန်မာပြည်သူများ ကာယစိတ္တ သုခနှစ်ဖြာ ပြည့်စုံပါစေရန်နှင့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိပါစေရန် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါ ကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးချိန်မှ စတင်ပြီး အင်အားတောင့်တင်း လာခဲ့ကာ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အောင်မြင်မှုများရခဲ့သလို နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင်လည်း ပိုမိုထင်ရှားသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာခဲ့ကြောင်း၊ အဆွေတော်သမ္မတ၏ ဉီးဆောင်မှုအောက်တွင် မြန်မာပြည်သူများသည် သာယာ ချမ်းမြေ့သည့် နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး စီးပွား ရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း။
ဗီယက်နမ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိနေရာမှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အထူး ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၈၆ဝ) ကျော်ရှိခဲ့ရာ အဆိုပါပမာဏသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကထက် ၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ များမကြာမီ တွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁ဝဝဝ) ထက် ကျော်လွန်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်း နှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံများအနက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် အဆင့်(၇)တွင် အစဉ်တစိုက် ရပ်တည်နေပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂ ဒသမ ၁) ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကာ စီမံကိန်း (၁၈)ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရှိပါကြောင်း။
နှစ်နိုင်ငံမြို့ကြီးများအကြား တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းများ ပြေးဆွဲပျံသန်း လျက်ရှိသည့်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား အပြန်အလှန် ထိတွေ့ဖလှယ်မှုများကို တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ် ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများသည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်မှုများ ပိုမိုရရှိရန်အတွက် အလားအလာများစွာ ရှိနေပါကြောင်း။
အဆွေတော်သမ္မတ၏ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တရားဝင်အလုပ်သဘောခရီးစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဗုဒ္ဓနေ့သို့ တက်ရောက်မှု ခရီးစဉ်များသည် အောင်မြင်မှုများရရှိပြီး ဗီယက်နမ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံ ရေး ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟု အလေးအနက် ယုံကြည်မိပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံ သာယာဝပြော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး မြန်မာပြည်သူများ ပျော်ရွှင်ချမ်း မြေ့စေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ဗီယက်နမ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘက်စုံမိတ် ဖက်ဆက်ဆံရေး အဓွန့်ရှည်စေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ အဆွေတော်သမ္မတနှင့် ဇနီးသည်တို့ ကျန်းမာချမ်းသာစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ကြွရောက်လာကြ သော ဧည့်သည်တော်များ ကျန်းမာချမ်းသာစေရေးအတွက်လည်းကောင်း မိမိအနေ ဖြင့် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် မိမိနှင့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သာယာလှပသည့် ဟနွိုင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိချိန်မှ စတင်၍ နွေးထွေးပျူငှာလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုခဲ့ပြီး ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ခဲ့မှုများအတွက် ဗီယက်နမ်အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးကို အထူးအလေးထား ပါကြောင်း၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများသည် မိမိတို့ လွတ်လပ်ရေးရရှိရန်ကြိုးပမ်းစဉ် အချိန်ကတည်းကပင် စတင် ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့၏ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ဗီယက်နမ် ခေါင်းဆောင်ကြီး မစ္စတာဟိုချီမင်းတို့ လက်ထက်တွင် စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့သည့် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် နှစ်ဉီးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ယခုထက်ပိုမို နက်ရှိုင်းခိုင်မာလာစေရန် ဆက်လက်ကြိုး ပမ်းကြရမည်မှာ မိမိတို့၏တာဝန်ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း အများအပြားတွင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၊ ဂျီအမ်အက်စ်၊ စီအယ်လ်အမ်ဗွီ၊ အက်ခ်မက်စ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏အောက်တွင် အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြပါကြောင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာများတွင် နားလည်မှု အပြည့်အဝရှိပြီး မြန်မာ နိုင်ငံဘက်မှ အစဉ်အမြဲ ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြသည့် ဗီယက်နမ်အစိုးရနှင့် ပြည်သူများကို မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပြည်သူများကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
မိမိတို့ အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံ့တာဝန်များကို စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် (၃)နှစ်တာကာလကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ တာဝန် ယူစဉ်ကာလအတွင်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သည့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု အမြောက် အများ ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရမည့် အခက်အခဲ အတားအဆီးများကလည်း ကျန်ရှိနေပါသေးကြောင်း၊ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ် မှုနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဆွေများ၏ နားလည်ပံ့ပိုးမှုများနှင့် အဆိုပါ အခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည် ထားပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် တူညီသည့် ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို မျှဝေပိုင်ဆိုင်ထားကြသည့် နိုင်ငံများဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန် အဆက်အသွယ်ထူထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၇၅ ခုနှစ်က စတင်ပြီး စစ်မှန်သည့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်သွယ်မှုထူထောင်မှု (၄၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများကို ကျင်းပနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည့် အတွက် သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကို စိုက်ထူနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို မိမိ၏ ခရီးစဉ်အတွင်းတွင် တွေ့မြင် ခွင့်ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် အာရှ၏ ပွင့်လင်းမှု အရှိဆုံးနှင့် စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါကြောင်း။
မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီး ယခုဆိုလျှင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နဝမမြောက် အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံနှင့် သတ္တမ မြောက် အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နေပါကြောင်း။
မိမိတို့ အစိုးရသည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများကို ဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေချောမွေ့သည့် စီးပွားရေးဝန်းကျင်ကောင်း တစ်ခုဖြစ်ရန်ကိုလည်း ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပိုမို လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြရေးအတွက်လည်း ဖိတ်ခေါ်လိုပါ ကြောင်း။
ယခု နေ့လယ်စာစားပွဲ မတိုင်မီတွင် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ အကျိုးစီးပွား အတွက် ဘက်စုံကဏ္ဍစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် မိမိနှင့် အဆွေတော် ဝန်ကြီးချုပ်အကြား ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် မိမိတို့ တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့် အညီ လက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမို ခိုင်မာ အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ကြောင်း။
မိမိတို့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ရှိနေစဉ်အတွင်း နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုခဲ့မှု နှင့် အကောင်းဆုံး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများအတွက် အဆွေတော်၊ ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရနှင့်ပြည်သူများကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်းကို ထပ်မံပြောကြားလိုပါကြောင်း။
မိမိအနေဖြင့် ဗီယက်နမ်သမ္မတ မစ္စတာ ငုယင်ဖူးကျောင့်နှင့်ဇနီး ကျန်းမာစေ ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး နှင့်တကွ ယနေ့ နေ့လယ်စာ စားပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်များ ကျန်းမာချမ်းသာ ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး အဓွန့်ရှည်ခိုင် မာရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သာယာဝပြောပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကာ ပြည်သူများ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရန်အတွက်လည်းကောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ် ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဗီယက်နမ် ဝန်ကြီးချုပ်တို့သည် နေ့လယ်စာကို အတူတကွသုံးဆောင်ကြပြီး ဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၏ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှုများကို ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။
နေလယ်စာစားပွဲအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဇနီးတို့သည် ဗီယက်နမ် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုပန်းစည်းပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက် သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဗီယက်နမ်-မြန်မာ ပါလီမန်ချစ်ကြည် ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Nguyen Manh Tien ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ခေတ္တတည်းခိုသည့် Sheraton Hotel ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဗီယက်နမ်နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အကြား ထူထောင် ထားရှိသည့် ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဝင်များအတွက် အပြန်အလှန် ခရီးစဉ်များ တိုးမြှင့် စီစဉ်ရေးကိစ္စရပ်များအပါအဝင် ချစ်ကြည်ရေးအသင်းများမှ တစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်၊ အစိုးရနှင့် ပြည်သူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ် များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မဒမ် ငုယင်သီ ကင်ငန်းနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအကြား လွှတ်တော်နှစ်ရပ် အကြား ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ခဲ့ကြသည့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု အစဉ်အလာနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း နှစ်ဖက်လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကြောင့် အပြုသဘော ဆောင်သည့် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အနာဂတ်တွင် နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော် များမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားနှင့် နှစ်ဖက်ပြည်သူများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီးတို့သည် ဗီယက်နမ်အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ကုလသမဂ္ဂဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြ သည့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအား အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ တည်ခင်းဧည့်ခံ သည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ကြသည်။